Inona no tokony hatao raha vaky ny thermometer amin'ny mercury: poizina ve izany? | Green Renewable
Inona no tokony hatao raha vaky ny thermometer amin'ny mercury: poizina ve izany?
Isika rehetra dia samy nampiasa ny thermometer mercury tamin'ny fotoana sasany tamin'ny fiainantsika mba handrefesana ny hafanan'ny vatana. Fitaovana iray izay efa be mpampiasa amin'ny zavatra maro izy io ankoatry ny ampiasaina haka hafanan'ny vatana. Noho ny fisian'ny karazanà thermomètre hitera-doza mandritra ny fampiasana azy dia tapaka ny hanolo azy ireo thermometre nomerika vaovao. Mety hampidi-doza ny thermometer mercury raha vaky. Noho izany, hanazava isika inona no hatao raha vaky ny thermomère mercury. Misy poizina ve?
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra rehetra, ny fampiasana ary ny zavatra tokony hatao raha vaky ny thermometer mercury.
1 Thermometer Mercury
2 Fampiasana ny thermomère mercury
3 Inona no hatao raha vaky ny thermomère mercury
4 Ny thermometers dia tsy misy poizina noho ny merkiora
Ireto thermometers ireto dia fitaovana hafa izay natsangan'ny mpahay fizika sy injeniera poloney antsoina hoe Daniel Gabriel Fahrenheit. Izy io dia jiro izay mipaka amin'ny fantsom-boasary manify ao anatiny izay misy ny rakotra vy. Ataovy ao an-tsaina izany ny habetsaky ny metaly ao anaty fantsona dia ambany noho ny totalin'ny fantsona. Mba hahafantarana ny sanda mari-pana dia misy isa maromaro manondro ny halavan'ny maripana. Rehefa nanontaniana ny antony nampiasana ny mercury ho an'ity karazana thermométer ity, na dia mampidi-doza aza dia valiana fa mora be ny manova ny habeny miankina amin'ny maripana.
Izany hoe, ny ambony na ambany ny mari-pana dia misy, izy io dia hanitatra bebe kokoa na latsaka. Noho io fandidiana io dia azo atao ny manisy marika a alohan'ny sy aoriny amin'ny siansa rehetra amin'ny ankapobeny. Ny fampivelarana ny thermometer mercury dia afaka manamora ny fandrosoan'ny siansa amin'io lafiny io. Noho izany dia karazana fitaovana izy io izay heverina mandraka androany ho iray amin'ireo famoronana tsara indrindra.
Na izany aza, na dia nanjary iray amin'ireo famoronana tsara indrindra aza izy io, dia tsy ampiasaina ankehitriny. Na dia somary lehibe aza ny maripana azony rakofana, dia mety hitatra lavitra kokoa amin'ny alàlan'ny fampidirana azota na gazy tsy mety hafa. Ary ireo thermometers ireo dia manana loza mitatao amin'ny fampiasana samihafa.
Fampiasana ny thermomère mercury
ny thermometers rakotra izy ireo dia nampiasaina tamin'ny faritra maro hafa ankoatry ny fihinanana hafanan'ny vatana. Mbola misy trano izay ahitana ireo thermometa ireo hita eo am-baravarana handrefesana ny mari-pana manodidina. Nampiasaina tany amin'ny hopitaly koa izy ireo mba handrefesana ny hafanan'ny marary. Ny faritra hafa izay nampiasana ny thermomère mercury dia banky rà, incubator, andrana simika, lafaoro, sns. Ny indostria dia sehatra iray izay nampiasa ihany koa ny thermomère mercury ho an'ny toby famokarana herinaratra, hahafantarana ny satan'ny fantsom-panafody, ny fitaovana fampangatsiahana sy ny fanafanana, ny fitehirizana ny sakafo, ny sambo, ny mpanao mofo, ny trano fitahirizana, sns Tsara ny manamarika fa ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny lakozia dia nampiasa ireo thermometers ireo ihany koa.
Fantaro ny sandan'ny mari-pana tena ilaina ny famokarana vokatra na ny fanamafisana ny lamina sasany. Fantatsika fa ny merkurizy dia singa voajanahary izay ny isan'ny atomika dia 80. Matetika izy io no notakiana nandritra ny taona maro teo amin'ny tontolon'ny toetr'andro satria anisan'ny fitaovana meteorolojika toy ny barometre, manometre ary fitaovana hafa izy ireo. Ny fanadihadiana sasany dia milaza izany ny fampiasana an'io metaly io dia tsy azo antoka ho an'ny mponina, ka nesorina tsikelikely teny an-tsena.
Inona no hatao raha vaky ny thermomère mercury
Ny lalàna dia manondro fa tsy misy fitaovana misy merkiora azo ivarotana. Ary io no naseho fa manana risika be amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana ny merkiora. Anisan'ny vokany ny fahalotoan'ny rano, ny tany ary ny biby.
Ny loza ateraky ny merkiora dia mitoetra ao amin'ny zavony. Raha vaky ny thermometer mercury, dia hiteraka etona misy poizina azo tsofina. Rehefa raraka ny merkiora dia tsy maintsy angonina avy hatrany alohan'ny hisian'ny vokatra ratsy hafa. Matetika dia tsy fantatry ny olona izay hatao raha vaky ny thermometer amin'ny mercury. Amin'ireny karazana toe-javatra ireny dia tsy tokony hisy mpanadio na kifafa hanadio azy na amin'ny lafiny inona na inona. Tsy azo atao ihany koa ny maka ny sisa tavela amin'ny mercury amin'ny tanany miboridana na manondraka ilay ranoka ao anaty trano fidiovana na fantsakana.
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny mercury dia afaka mandoto rano an'arivony litatra. Raha mandraraka ny sisa tavela amin'ny mercury isika, dia handoto litatra an'arivony tsy ilaina. Noho izy singa maloto tokoa, dia afaka miteraka fahasimbana lehibe amin'ny vola kely. Raha jerena ny tsy fitovizan'ity singa ity, rehefa mianjera amin'ny tany izy dia mizara ho latsaka kely kokoa ary afaka mivelatra amin'ny lafiny rehetra. Raha vantany vao milatsaka ny thermometer ary mivoaka ny rano dia tsara kokoa ny manala ny ankizy sy ny biby fiompy amin'ny faritra ary manokatra ny varavarankely na varavarana mba hidiran'ny rivotra.
Iray amin'ireo torohevitra tsara indrindra ny mampiasa lamba, fonon-tànana ary sarontava mba hanadiovana azy. Amin'izany fomba izany dia ho voaro amin'ny mety ho fitrohana ny etona misy poizina isika. Raha latsaka amin'ny faritra fisaka ny thermométer dia mora kokoa ny manadio noho ny manana triatra izay azo atsipy ny fizarazaran'ireo vy kely. Ilaina ny miantoka fa manana famerenana tsara ianao ary mandinika ny rano mitete amin'ny rakotra rehetra ao anaty tany, satria mety handoto sy hiteraka olana lehibe izany. Raha manadino ny manangona ny sasany amin'ireo rotsak'orana isika ary misy olona na biby manohina na moka ny entona misy poizina, mety hiteraka fanapoizinana, fahasimban'ny ati-doha, olana amin'ny fandevonan-kanina sy voa.
Ny thermometers dia tsy misy poizina noho ny merkiora
Noho ny loza aterak'ireto thermometre ireto dia tsara kokoa ny manana a torolàlana momba ny fividianana thermometer misafidy ireo izay afaka manolo azy io soa aman-tsara. Misy karazana thermometers maro karazana izay tsy mampidi-doza ary manana fampisehoana avo dia avo.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity ianao dia afaka mianatra ny zavatra tokony hatao raha vaky ny thermometer mercury.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Inona no tokony hatao raha vaky ny thermometer amin'ny mercury: poizina ve izany?